तपाईंको छुट्टी याद गर्न गुगल फोटोहरूमा कथा सिर्जना गर्नुहोस् Androidsis
गुगल फोटोहरूमा म्यानुअली कसरी कथा सिर्जना गर्ने
जब Google तस्बिरहरू Google I / O २०१ at मा कीनोटबाट घोषित गरिएको थियो जहाँ यस वर्षको लागि सबै Google समाचारहरू प्रस्तुत गरिएको थियो, उपहास उपस्थित भीडबाट आएको थियो जुन थाहा पाएर प्रयोगकर्ताहरू हुनेछन्। असीमित भण्डारण क्षमता तपाईंको सबै फोटो र भिडियोहरूको। एउटा सुविधा गुगल फोटोहरूलाई एक उत्तम ग्यालेरी अनुप्रयोग हुन अनुमति दिएको छ र हामी अनलाइन लिने सबै फोटोग्राफहरूको सुरक्षा गर्न।
यो सनसनीपूर्ण सुविधा बाहेक गुगल फोटोसँग भन्दा केहि अन्य विवरणहरू छन् हामीले समीक्षा गरेको समयमा यहाँबाट एन्ड्रोइडिसमा। यसको सब भन्दा उल्लेखनीय गुणहरू मध्ये एक यो हो कि हामीले उही स्थानमा लिएका फोटोग्राफरहरूसँग स्वत: कथाहरू सिर्जना गर्ने क्षमता र उनीहरूमा देखा पर्ने तत्वहरूमा केही समानताहरू छन्। यी कथाहरू आफैं पनि गर्न सकिन्छ र यसको लागि हामी आज यहाँ छौं, एउटा सानो ट्यूटोरियलको साथ जुन तपाईंलाई कसरी चाँडो गर्ने भनेर सिकाउँदछ र ती दिन बिच र हिमालहरूमा काम आउँदछ।
कोमो हामी त्यो गर्मीको साथ पहिले नै गर्मीको सामना गर्दैछौं कि हामीलाई लगभग डुबाउँछ र हामीलाई थोरै शान्त पार्न तटमा जानको लागि कराउँछ।आज हाम्रो समुद्री किनारमा जाँदा हामी बाँच्ने पलहरू सम्झन हाम्रो फोनको क्यामेरा दिनहुँ प्रयोग गर्न थाल्नेछ। त्यसोभए अद्भुत गुगल फोटोहरूको साथ आफ्नै कथाहरू सिर्जना गर्नाले निश्चित रूपमा तपाईंको साथीहरू वा परिवारलाई यी दिनहरूमा अवाक् गर्न छोड्नेछ जुन हाम्रो अगाडि पर्खिरहेको छ।
गुगल फोटोहरूमा कहानी कसरी बनाउने
हामीले स्थापना गरेको हुनुपर्दछ पहिलो चीज Google Play अनुप्रयोग आफैं Play Store बाट आयो। यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईंले छविहरूको स्वचालित लोडिंग सक्रिय गर्नुभयो ताकि हामी अझ छिटो काम गर्न सक्दछौं, किनकि यदि यो त्यस्तो थिएन भने, हामीले थोरै बेरसम्म पर्खनु पर्दछ, कहानी सिर्जना हुँदा, किनकि गुगल फोटोले तिनीहरूलाई तपाईंको खातामा अपलोड गर्दछ।
हामी अनुप्रयोग खोल्छौं गुगल फोटोहरूबाट
अब हामी पहुँच गर्दछौं बाँया प्यानल प्यानल जहाँ हामीसँग सबै महत्त्वपूर्ण कोटीहरू छन्।
हामी चयन गर्दछौं "सहायक".
एक पटक «सहायक in हामीसँग हुनेछ मुख्य स्क्रीन.
माथिल्लो दायाँमा हामीसँग आइकन «+» छ कि हामी थिच्नु पर्छ।
यसलाई थिच्नाले बिभिन्न विकल्पहरू खोल्दछ जस मध्ये हामी choose ईतिहास choose छान्छौं.
अब सबै भन्दा रचनात्मक अंश रहनेछ, जहाँ हामीले चाहेको क्याप्चरहरू छान्नु पर्छ अन्तिम रचना को लागी।
सिर्जनामा ​​क्लिक गर्नुहोस् र गुगल फोटोहरूले अरू सबै कुरामा ध्यान दिनेछ।
जब हामीसँग यो तयार हुन्छ, हामी केहि निश्चित परिवर्तनहरू गर्न मन्जुर गर्न सक्छौं जस्तै कथा पुन: नामकरण गर्ने क्षमता वा रचनामा देखा पर्ने प्रत्येक छविमा एक विवरण थप्नुहोस्।
सबै एक यी गर्मीका दिनहरूको लागि गुगल फोटोहरूबाट राम्रो सुविधा परिवार र साथीहरूको साथ केहि हप्ताको लागि हामी पर्खिरहेका छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » गुगल फोटोहरूमा म्यानुअली कसरी कथा सिर्जना गर्ने